'Ama-Desinfo agents & abafokazi' i-VERSUS 'abonisa izinkinga zangempela emhlabeni futhi eze esenzweni': UMartin Vrijland
ahanjiswe [I-AIRD ALARM], IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-30 Juni 2017	• 7 Amazwana
Kuyizinsuku zangempela ukuthambekela kwangempela ukukhuluma nge 'matrix'. Esikhathini sami sokugcina mayelana nayo UMartijn van Staveren Ngichaza ukuthi ngombono wami ama-agent e-desinfo asebenza njengethente lokuphepha kubantu abavusa amandla futhi abathumele ehlathini elithile le-opaque (okuthiwa) nolwazi kanye nokubeka ithemba lokungenelela kwamanye amazwe. Incazelo yangempela yalokho esikubiza ngokuthi 'i-matrix' iphonswa kwi-blender enezindaba ezingezansi futhi ihlanganiswe nendaba engacaciswanga. Kubonakala sengathi kukhona abantu abambalwa abazwela ezinhlobonhlobo ezifana ne-Martijn van Staveren (abathi ngokwabo bathi "ngokuthobeka" abafuni ukuba yizikhulu, kodwa okwamanje baziphakamisa uhlobo lwegunya). Izinhlobo ezinjalo zemibono yezitshalo ezingqondweni zabantu ukuthi zixhumana nezinhlangano okuthiwa i-galactic. UMartijn uthi futhi uzovela esikhathini esizayo. Ungathi: "Ubani obetha lelo kholomu?"Awu, kukhona izinkulungwane. Kungenzeka ukuthi ifomu lempumelelo lisekungcoleni okungokomoya kanye nesifiso sokuba abantu babe yingxenye yeqembu elikhethekile. Izindlela zokuxilonga zikaMartijn van Staveren zenza konke okunye.
Ku- Ikhasi le-Facebook kusuka kuwebhusayithi ye-Earth Matters sibona lokhu okulandelayo [isicatshulwa] "UMartijn van Staveren ukhumbula iminyaka engu-500.000 esikhathini esizayo." Funda ngokwakho:
Kakade ezincwadini zami ezimbili zangaphambilini mayelana noMartijn van Staveren (bheka lapha en lapha), Ngitshele ukuthi uyazi ukuthi angayithola kanjani njengokwethenjelwa. Lokhu kubonakala kubangele abantu abaningi. Usebenzisa izihloko ezichazwe kumasayithi ahlukumezayo afana nalokhu bese uziphonsa ku-blender wakhe ongumfokazi ukuze azixhumanise nakwezinye izizwe ezibukeka kahle futhi 'ne-galactic federation' nokunye okunjalo. Isizathu esenza abantu babonakale bemthatha ngokungathí sina cishe sitholakala eqinisweni lokuthi ugcina izindaba ezilandelanayo mayelana nokuhlangana kwabafokazi kanye nokuhamba kwakhe kwesikhala. Yena ngokwakhe uhlangabezane noJesu ngesikhathi esisodwa sokuhamba kwakhe (bheka i-YouTube ngezansi).
Ngesinye isikhathi, ngiyakholelwa ngokuphelele ukuthi kukhona abantu abanokuhlangenwe nakho okungajwayelekile. Ingabe akuyona into enenjongo ukubuza umbuzo lapho kwenzeka khona lokho okuhlangenwe nakho? Ungakwazi yini ukucabangela ukuthi (ukucabanga ngendaba yami yokufanisa komshini, njengoba kuchaziwe lesi sihloko) ukubukeka okunjalo kungahle kube "kudlalwa"? Kungenzeka yini lokhu okuhlangenwe nakho okubangelwa, isibonelo, ukucubungula noma 'izindlela zokubeletha ezinjengeMK Ultra'? Kodwa masibuye sicabange ngomqondo kanye nokukhethwa kwamabhizinisi 'amademoni' kulezi zici. Ngithanda ukusebenzisa igama elithi 'ukungenelela kukaLuciferi' kulowo mongo. Mina ngokwami ​​ngiyazi abantu abambalwa abathi baye babona abafokazi empilweni yabo. Ngicabanga ukuthi baqotho, kodwa impendulo yami kulezi ziqalo: yiba nomcabango we-Luciferian field field. Njengomakhi wokwenza izilinganiso 'angafaka' noma yikuphi into efunayo emdlalweni, ngakho-ke umakhi walesi sivumelwano se-Luciferian (ukulinganisa).
Mina mathupha wokuthi Martijn van Staveren iqiniso kakhulu exutshwe desinfo futhi ngaphawula ukuthi naye kanye nomlawuli iwebhusayithi Earth Izindaba, Arjan Bos, njalo wenze ewusizo lwezihloko yami sebenzisa (futhi ngempela uthole) Izikhonzi ngiloba mayelana cocisana ngamavidiyo Amandla amakhulu. Yilokho ngempela okuhlakaniphile kakhulu (noma kucwengisiwe: khetha bese ukhetha). Ngalowo mqondo ngithola kuyingozi, ngoba abafundi bami abanefilimu yabo yamandla amakhulu bathunyelwa emahlathini angaphandle, kuyilapho ngenza konke okusemandleni ami ekunqumeni amahlathi (kanye nokungaqondi kahle okufanayo) futhi ngenze inkinga iqondakale. Ngamafuphi: ngombono wami u-Martijn no-Arjan bakha inhlanzi yezintambo (ngokuxhumanisa yonke into endabeni yobufokazi ku-alien blender). Phakathi naleso sikhathi, imali ibuzwa ukusebenza ngalunye nakuwo wonke ama-DVD, ngakho ithola imali eningi.
Ngokombono wami, Martijn futhi uzama ukugqugquzela abantu ukuba adalule matrix, ngoba ugqoka ezingamanga umzila nethemba luhlala ku Galactic ukwesekwa (elithize abengumsunguli isetshenziswa). Ukuze uveze umthamo, awudingi ukubeka isithombe samanga / esingalungile salowo matrix. Ngithola ulwazi lwamanga oluhamba ngenkohliso yamaLuciferi, ngamafuphi: inetha lokuphepha. Ungasebenzisa igama elithi 'matrix', kodwa uma ungalichazwisi kahle futhi uligcine nge-colder, uzinika amandla okuba u-matrix ngokwakho.
Izindlela zokuxilonga ekuqinisekiseni ukuthi uMartijn van Staveren usebenza, ngombono wami, ngokulingana okufanayo njengesizukulwane sokukholelwa kokugcwaliseka ngomoya ongcwele esontweni lePentekoste; linikeza umzwelo omuhle, kepha futhi (Luciferian) desinfo. Awuqinisekisi lutho. Ubeka phansi kuphela ukukholelwa kokuqinisekiswa. Uba namandla ngokuma kuleli zwe, ukuveza amanga, ukukhuluma iqiniso nokubona ukuthi ungumuntu onamandla. Awudingi ukwenza noma yiziphi izintambo zamandla. Wena umphefumulo onamandla; ukungafi nokudala. Sinakho amaqhawe en izinhliziyo ezinhliziyo izinhlobo ezidingekayo nezingaqondakali ezizama ukuzwa umphumela wokuzizwa ("ukugunyazwa") ngesandla sabo enhliziyweni futhi okwamanje ziqhubeke ukudansa ematrix futhi ziqhubeke zihlala njengezigqila. Kumele futhi sibone futhi sikhombise amanxusa kaLucifer. Yilokho engikwenzayo ngakho-ke ngibuye ngibheke kuMartijn no-Arjan (njengezithunywa kumanye amazwe amazwe / ukuphepha). Yingakho ngibonisa abalondolozi besango lale matrix: I-aristocracy; i-piramidi yamakhemikhali ohlaka lwamandla lapho i-aristocracy, iRoma kanye nemiphakathi eyimfihlo idlala indima ebalulekile.
Kufanele uchaze i-matrix ngendlela efanele. UMartijn no-Arjan baphonsela umqondo ku-blender wabo osemzinikazi. Incazelo ecacile ye-matrix yilapho engikhathazekile: I-firewall - iqiniso langempela (indawo yethu ye-3D) lapho Lucifer (Enki) ugibela khona umphefumulo wethu. Uzothola incazelo eningiliziwe ngalokhu lesi sihloko. Amanethi okuphepha okungekho emthethweni ayingxenye ye-matrix. "Abafokazi" abakhona ngempela yizinhlangano zamademoni (amaLuciferian) esizibiza ngokuthi u-Annunaki, Archonten, jinns njll. Bakukhohlisa ngombono wokuba khona (futhi kwabanye "ngisho" bavele ") bezinhlanga ezihlukile. Ekufaniseni komshini ungabonisa konke esikrinini. Umakhi (Lucifer) angenza okufanayo kulokulingisa kwe-matrix. Ukugxila ekuhleleni kwamanga okungekho (Lucifer okufaniswe nemikhakha yamazwe angaphandle) ingqondo engalungile. Kumele sigxile ekwakheni nasekulawuleni le matrix: Lucifer. Sidinga ukudalula nokuqeda leyo matrix.
Ngokombono wami kumawebhusayithi efana Umhlaba Izindaba (Arjan Bos) kanye WantToKnow (Guido Jonkers) ongafanelekile ngokugqugquzela lokhu Martijn van Staveren futhi lokunikeza inkulumo. Arjan Bos wakwenza lokhu amahora Isixuku Amandla ukukhiqiza amabhayisikobho (okuyinto ungakwazi ukuya ngenkokhelo) kanye Guido Jonkers wakwenza lokhu ekuhleleni izinkulumo of Martijn futhi ukukhuthaza umuntu kwi website yakhe. Futhi abantu abanjengoMarcel Messing abasuka kuwebhusayithi WijWordenWakker futhi John Consemulder UMartijn van Staveren uthathe ngokungathí sina kuHealingSoundMovement. Umbuzo ongawubuza ukuthi ngabe lawa mawebhusayithi awawahloliswanga yini yi-AIVD. Kungani kungenakufakwa endleleni futhi kubonakala sengathi kunayo yonke imithombo edingekayo yezezimali nezobuchwepheshe? Lokhu ngolwazi lokuthi mina ngokwami ​​ngidinga ukugaya iningi lokukhohlisa nokunyundela ekhelini lami; kunezindawo eziningi zenzondo emelene nomuntu wami zasungulwa kanye nabesifazane namakhosikazi eM Earth Matters, WantToKnow nabanye bawagcwalisa ngokugcwele amaphothi abo ngeqiniso / kolder-blenderstories. Ngakho-ke ingabe isinkwa sami sengizihlambalaza ukuthi ngibagxeka lezi zinduna? Cha, uma ngingathanda ukuthola imali yami ngokuthengisa, ngiye ngafakazelwa ukuthi ngihle kakhulu esikhathini esidlule. Kodwa imali ayiyona isisusa sami. Kuyinto isidingo sokuhlukanisa amanga aqaphelayo nokungazi lutho ngokusesha okujulile kweqiniso; ukuhlukanisa ukolweni kumakhoba. Kuyinto isidingo sokuhlanza imidiya ehlukile ekuphumeni kwe-bullshit. Isisusa sami ukuvusa ukuvusa kwangempela, ngokungafani nabantu abahlanganyela ekunikezeni umxube we-hypnosis-alien-sleeper.
UMartijn van Staveren inkanyezi ekhulayo eNetherlands engokomoya?
Yeka ukuthi ukungena kweminye imithombo eminye imithombo inikeza u-Edith Schippers i-alibi ngenhla yokuthi 'abantu abadidekile'
Ama-agent e-Dis-info, amanetha okuphepha, uMark Passio nabanye
I-AIVD ifuna amakhulu abantu abasha
Amathegi: amanxusa, aivd, okunye, Arjan Bos, ukuphikiswa okulawulwayo, deinfo, Izindaba Zezwe, afakiwe, elawulwayo, Guido Jonkers, I-Marcel Messing, UMartijn van Staveren, abezindaba, inetha lokuphepha, amanetha okuphepha, WantToKnow, Siba yi-Phaphama
30 Juni 2017 ku-18: 31
Ngisho ngokuqondile, ngathola ukurekhoda mayelana nokuhlangana noJesu ukuhlekwa okuphelele nokungakholeki ngokuphelele. Uhle kakhulu ngamazwi gochelen (kakhulu i-chogem) ukuze ugijimelane ngokubambisana okungenasisekelo. Yiqiniso kukhona ukuthuthukiswa kwamanye amazwe, empeleni wonke umuntu uyinkosi futhi yiqiniso i-3d iyi-hologram. Umnumzane uyazi ukuthi engasemuva. Kuphela kuphela okunomfanekiso ohlukile kakhulu wemali engenayo ....
1 July 2017 ku-04: 45
I-ajenda yonke ye-Alien yinto yokwakha i-CIA ngokuxhaswa ngezezimali evela kumaRockefellers naseHollywood yaseSatanic, hlola isiqephu se-Corbett umbiko ngakho. Isango laseZulwini kusukela eminyakeni engama-90 futhi laliyihlelo le-CIA elifakwe e-UFO elenzelwe ucwaningo lwe-MK Ultra.
Ngeshwa, kunezinqwaba zabantu abangazinzile abenza lolu hlobo lokungazizwa kahle futhi lolu hlobo lwezinkinga ze-CIA eminye imithombo ngokungaziwa futhi ngokungazi lutho luhlanganiswe nolwazi olungathí sina olunembile, ngokuqondile njengendlela yokwaziswa okungalungile.
1 July 2017 ku-08: 12
1 July 2017 ku-08: 15
1 July 2017 ku-08: 58
Yebo, unenkathazo 'ngokuhlukumeza' njengoba behamba ngokungahambi kahle kwe-Messrs Bos ne-van Staveren. Ngombono wami, bangabantu abangenelisekile ngesimo eNetherlands / izimpilo zabo / ezombangazwe.
Kodwa besaba ukubhekana nalabo abagcina uhlelo eNetherlands. Lokhu kungaba umqashi wakho, osombusazwe abangathembekile, izinguquko zomphakathi ongavumelani nazo, njll. Ngokuvamile laba bantu abanobuthakathaka banomsebenzi omuhle, kanye nohulumeni. Abafuni ukulwa, baphelelwa umsebenzi omuhle / ukuphepha, ngakho babalekela, balwe noma baphenduke indiza, kodwa ezindabeni zezinhlobo ezifana noMnu Bos noVanveveren. Kodwa-ke, amakholwa amahle, angenelela noma asebenze, ngakho-ke agcina isimo se-quo.
2 July 2017 ku-11: 00
Uma lo mfana omuhle efika kude kakhulu nakusasa, kufanele futhi kumlahle umzamo omncane ukutshela ukuthi amandla angakhululeka kanjani? Noma enye iseluleko sangempela. Esikhundleni samazwi akhohlisayo futhi angenangqondo awunayo lutho.
Ngisho uma sibuyela emuva njengomuntu esikhathini esidlule, khona-ke singadlulisela okuthile? Kodwa esikhathini esidlule abantu babelokhu beqhubeka kakhulu njengathi manje. Noma ingabe sonke sisekhathini sesikhathi lapho isikhathi esingekho khona ngempela?
9 July 2017 ku-13: 29
Mayelana ne-Micha Kat asisenayo ... Ngivele ngivezile lokho okwanele lapha.
Inombolo yakhe yabalandeli be-YouTube ichaza kakhulu:
« UMartijn van Staveren, Amandla Okuxubile kanye nokuqinisekiswa okubukwe nguMartin Vrijland
Icala leRomy & Savannah linamathele ezindabeni zezindaba kanye "nobufakazi" obungavumelekile »
Ukuvakashelwa okuphelele: 15.957.121
Marcos op Intsha yanamuhla ifuna ukugcwalisa amakamu wokufunda kabusha (ama-gulags) ngabaphikisi bezulu